ဇင်လင်း - တရုတ် အိန္ဒိယ သြဇာပြိုင်ဆိုင်မှု ကြားက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ရေး - MoeMaKa Media
Home / Currents / Opinion / Zin Linn / ဇင်လင်း - တရုတ် အိန္ဒိယ သြဇာပြိုင်ဆိုင်မှု ကြားက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ရေး
ဇင်လင်း - တရုတ် အိန္ဒိယ သြဇာပြိုင်ဆိုင်မှု ကြားက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ရေး
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၂၀
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအပင်ပေါက်ကလေး ရှင်သန်ရေးအတွက် ‘၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ’ သည် လွန်စွာအရေးကြီးနေသည်။ တချိန်တည်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စကလည်း အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်နေ သည်။ အစိုးရက ‘၂၁-ရာစုပင်လုံညီလာခံ’ ကျင်းပနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် ပဏာမငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းခင်းခြင်းဖြစ်၍ အဆင်ပြေရန် အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါညီလာခံတွင် ‘တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့’ ပါ၀င်ဖို့လိုသည်။ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့ ပါ၀င်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးမှသာ ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်း ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ဆင့်တက်အောင် ကြံဆောင်နိုင် ပါက လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၈) အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ‘ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင် နိုင်ခြေ ရှိ/မရှိ’ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရခိုင့်တပ်တော်(AA) နှင့် အစိုးရတပ်မတော် တို့အကြား အရှိန်မြင့်နေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖြစ်သည်။
လတ်တလော ပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အချို့ကို လေ့လာကြည့်လျှင် မြန်မာသည် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ် နိုင်ငံတို့အကြား တည်ရှိ နေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေး ဘေးကျပ်နံကျပ်ကြုံနေရသည်။ မြန်မာအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက သြဇာလွှမ်းမိုးသွားမည်ကို အိန္ဒိယ က စိုးရိမ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မျှော် မူဝါဒ (Look East Policy)တွင် မြန်မာသည် အရေးပါသော ကြားခံ နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယတို့သည် ကီလိုမီတာ ၁၆၀ဝ (မိုင် ၁၀ဝဝ)ခန့်ရှည်လျားသည့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ် နေသည်။ သို့ဖြင့် အိန္ဒိယသည် မြန်မာနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လာသည်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရှိ ကျောက်ဖြူ မြို့တွင် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် မြန်မာနှင့် တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ၂၀၁၆ တွင် သဘောတူညီမှု ရရှိပြီး တစ်လ သာသာတွင် ပထမဆုံး အိန္ဒိယသမ္မတတစ်ဦး၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် စတင်ခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းသည် တရုတ် အတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များတင်ပို့ရန် လမ်းကြောင်း ဖြစ်လာ၍ ရှည်လျားသော မလက္ကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ရန် မလိုတော့သဖြင့် အလွန်အရေးပါသည်။
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တလျှောက် တရုတ်နိုင်ငံက တည်ဆောက်ထားသော ဂွာဒါဆိပ်ကမ်း(ပါကစ္စတန်)နှင့် ဟန်ဘန်တိုတာ ဆိပ်ကမ်း (သီရိလင်္ကာ)များကဲ့သို ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာမည့်အရေးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက စိုးရိမ်မှုရှိသည်။ စီးပွားရေး အရ ကူးသန်းသွားလာနိုင်ရန် ဆောက်သည့် ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော်လည်း ယင်းဆိပ်ကမ်းကို အကြောင်းပြု၍ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အတွင်းသို့ တရုတ်စစ်တပ် ဝင်ရောက်လာမည်ကို အိန္ဒိယက စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် မြန်မာသည် အိန္ဒိယ ၏ နယ်စပ်သောင်းကျန်းသူများအား စစ်ဆင်တိုက်ဖျက်သည့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် အရေးကြီးသော လုံခြုံရေး မဟာမိတ် လည်းဖြစ်နေသည်။ အဆိုပါ အိန္ဒိယကို ပုန်ကန်နေသည့် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အချိုု့သည် မြန်မာ့နယ်မြေပေါ်တွင် ခြေကုပ် စခန်းများရှိနေသည်။ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများရှိ သူပုန်အုပ်စုများကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံ အားပေးနေ သည်ဟု အိန္ဒိယက မကြာခဏ စွပ်စွဲသည်။ ထိုသူပုန်များအား တရုတ်နိုင်ငံက လက်နက်ခဲယမ်းများ ကူညီနေ သည်ဟု လည်း စွပ်စွဲမှုများရှိသည်။
၂၀၂၀ ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့တွင် ‘The Times of India’ သတင်းစာ၌ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းတပုဒ် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ သတင်း ခေါင်းစဉ် တွင် “အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို အားပျော့ချည့်နဲ့စေရန် တရုတ်နိုင်ငံက ရခိုင်တပ်တော်အား လက်နက်ခဲယမ်း ထောက်ပံ့လျှက်ရှိ” (China supplying weapons to Arakan Army armed group to weaken India, Myanmar: Report) ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ ‘နေပြည်တော်အစိုးရ’ က အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြေညာထားသော ရခိုင်တပ်တော်(AA) အား တရုတ်နိုင်ငံက ငွေကြေးလက်နက်ထောက်ပံ့နေသည်ဟု အရှေ့တောင်အာရှမှ စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားလျှက် ‘Licas News’ က သတင်းပေးပို့ထားကြောင်း ‘The Times of India’ က ဆိုသည်။ သတင်းရင်းမြစ်၏ အဆိုအရ AA ရရှိနေသော အထောက်အပံ့အားလုံး၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်ထံမှဖြစ်သည်ဟူ၍ပင် ဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် ‘MANPADS(Man-portable air-defense system)’ ဟုခေါ်သည့် အလွယ်တကူ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့် ပုခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ်ဒုံး လက်နက် ၅၀ ခန့် AA တို့ထံ ရောက်ရှိနေပြီဟု ဆိုသေးသည်။ တရုတ်က AA အား လက်နက် ထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မြောက်စင်္ကြဒေသနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့မှတဆင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ သို့ ထွက်ပေါက်ရရှိစေလိမ့်မည်ဟု ‘Licas News’ က သုံးသပ်ပြသည်။
တရုတ်၏ မဟာဗျူဟာသည် ရခိုင်တပ်တော်(AA) အား အထောက်အကူပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဖက် ဒေသ (အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ) အပေါ် ‘သြဇာသက်ရောက်မှု နယ်ပယ်’ Area of Influence) ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်ဖြစ် သည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်။ သြစထရီးယားသုတေသီတစ်ဦး၏ အဆိုအရ တရုတ်သည် တောင်အာရှဒေသတွင် နိုင်ငံရေးကစားကွက် အများအပြားဖွင့်လှစ် ကစားနေသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့အဆိုအရ အိန္ဒိယသည် ပါကစ္စတန်နှင့် စစ်ရေး ပဋိပက္ခရှိနေသဖြင့် တရုတ်က အိန္ဒိယကို အင်အား ချည့်နဲ့သွားစေလိုသည်။ အိန္ဒိယအနေဖြင့်မူ မြန်မာနှင့် မသင့်မမြတ် ဖြစ်လိုခြင်း မရှိဟု သြစထရီးယား သုတေသီက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာအပေါ် အိန္ဒိယ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ချဲ့ထွင်လာမည်ကို တရုတ်က မလိုလားကြောင်း၊ သူတစ်ဦးတည်း မြန်မာအပေါ် လက်ဝါးကြီးအုပ်လိုကြောင်း အိန္ဒိယသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ၂၀၁၇ ဇွန်လတွင် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၂၀ ကုန် ကျမည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခုကို နယူးဒေလီအခြေစိုက် ‘C&C Constructions’ အား အိန္ဒိယအစိုးရက ချထားပေးခဲ့သော်လည်း မြန်မာအစိုးရက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့် စာရွက်စာတမ်းထုတ်ပေးရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ လအထိ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ရခိုင်တပ်ဖွဲ့ (AA) က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ(အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအချို့အပါအဝင်)၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့ကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ထိုပစ္စည်းများ တင် ဆောင်လာ သည့် ရေယာဉ်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းအောင်မြင်မည်ကို တရုတ်တို့က မလိုလားဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်အထောက်အပံ့ယူထားသော ‘AA’ က တရုတ်အလိုကျ အိန္ဒိယစီမံကိန်းကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆမှုများလည်းရှိသည်။
‘EASTERN LINK’ အွန်လိုင်းသတင်းစာ ဆောင်ပါးရှင် ‘Subir Bhaumik’ ၏ ‘Arakan Army gets Chinese weapons through BANGLADESH’ ဆိုသော သတင်းဆောင်းပါး၌ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်ကျောမှ တဆင့် ‘မိုနာခါလီ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ’ (Monakhali Beach) သို့ တရုတ်လက်နက်ခဲယမ်းများ တင်ပို့ခဲ့ရာ ဖေဖေါ်ဝါရိ ၂၁ ရက်နေ့ ညတွင် အခက်အခဲမရှိ ချောမောစွာရောက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုလက်နက်များတွင် တိုက်ခိုက်ရေးရိုင်ဖယ် ၅၀၀၊ ခေတ်မီ စက်သေနတ် ၃၀၊ ကျည်ဆံ ရ၀,၀၀၀ နှင့် လက်ပစ်ဗုံးသေတ္တာများပါသည်ဟု ဆောင်ပါးရှင် ‘Subir Bhaumik’ က ဆိုသည်။ ယင်းပစ္စည်းများကို အထမ်းသမား ၁၅၀ ခန့်နှင့် AA တပ်သား ၅၀ ခန့်ဖြင့် တောင်ထူထပ်သော မီဇိုရမ် တောင် ပိုင်းရှိ ‘ပါဗာစကြံန်’ (Parva Corridor) နယ်စပ်လမ်းမှ သယ်ယူခဲ့ပြီး မတ်လ ၂ ရက်တွင် AA ၏ ‘Sandak’ စခန်းသို့ရောက်ရှိ သည်ဟု ‘Subir Bhaumik’ က ဖေါ်ပြသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ ကောက်စ်ဘဇားနှင့် ဘန်ဒါဘန်ဒေသရှိ EASTERN LINK သတင်းထောက်များအဆိုအရ ဘင်္ဂလား ဒက်ရှ် ကြည်းတပ်နှင့် ရေတပ် ကင်းများက ရခိုင်တပ်တော်(AA) အား တားဆီးစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်သဖြင့် အဆိုပါ လက်နက် ခဲယမ်းများ အလွယ်တကူရောက်ရှိသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါလက်နက်များသည် ဖေဖေါ်ဝါရီ တတိယပတ်တွင် ရောက်ရှိသွားသည်ဟု ဆိုထားသဖြင့် တရုတ်သမ္မတ၏ မြန်မာ ပြည် ခရီးစဉ် ပြီးသည့်နောက်မှ ဖြစ်သည်။ တရုတ်သမ္မတ ‘ရှီကျင့်ဖျင်’ ၏ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့ တပ်မတော်သို့ ဖြေကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မည်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုမျှ လက်နက် ခဲယမ်း ထောက်ပံ့ခြင်း မရှိဟု ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအနေဖြင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် တရုတ်လက်နက်များ ရရှိနိုင်သည်ဟု ‘ရှီကျင့်ဖျင်’ က ပြောခဲ့ပြီး ယင်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စုံစမ်းသွားမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
အမည်မဖေါ်လိုသော ‘Think Tank’ အဖွဲ့တစ်ခုကို ကိုးကား၍ ဆောင်းပါးရှင်က တရုတ်၏ လက်နက် ထောက်ပံ့မှုသည် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒအရ ‘AA’ တစ်ဖွဲ့တည်းအား ထောက်ပံ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (ဥပမာ-UWSA; KIA) တို့ကိုလည်း ထောက်ပံ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ‘AA’ ကို ပေးသည့် အထောက်အပံ့များတွင် ငွေကြေး၊ လက်နက်ခဲယမ်း၊ စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်စုံများ၊ အခြားစစ်ပွဲတွင်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအပြင် တရုတ် နိုင်ငံလုပ် ‘FN-6’ ဒုံးလက်နက်များပါ၀င် သည်ဟု ဆိုသည်။ တရုတ်လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပို့နေမှုများ ယခုတိုင် ရှိနေသည်ဟု ဆောင်းပါးရှင်က ဆိုသည်။
ငွေကြေးထောက်ပံ့ရသည့်အကြောင်းမှာ တရုတ်၏ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကို အဟန့်အတားအနှောက် အယှက် မပေးရန်အတွက်ဟု ဆိုသည်။ ယခင် ဘီဘီစီ သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ ‘Subir Bhaumik’ ၏ အဆိုအရ အင်အားကြီးမားသော ‘UWSA’ သည် တရုတ်ထံမှ စစ်လက်နက်အကူအညီများရယူပြီး၊ အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်များအားလည်း ၎င်းမှတဆင့် လက်နက်ထောက်ပံ့မှုများရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်ထံမှ ငွေကြေး လက်နက်အကူအညီရပြီးနောက် ‘AA’ အဖွဲ့ နေ့ချင်းညချင်း အင်အားကြီးထွားလာသည်ဟု ‘စစ်ရေး သတင်းရင်းမြစ်’ အချို့ကို ကိုးကား၍ ‘Bhaumik’ က ဆိုသည်။ ထိုအချက်ကို ‘Bertil Lintner’ ကလည်း သဘောတူသည် ဟု ဆိုသည်။ ၀ါရင့် ဆွီဒင်သတင်းစာဆရာ ‘Bertil Lintner’ က တရုတ်သည် မြန်မာအား ခြိမ်းခြောက်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို အသုံးချသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကြေးနီမိုင်းလုပ်ငန်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော တရုတ် အစိုးရ၏ ကုမ္ပဏီအား မြန်မာက အဟန့်အတားလုပ်လာပါက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို အသုံးချ၍ လက်တုန့်ပြန်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း မြန်မာဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောဖူးသည်ဟု ‘Lintner’ က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။ ယင်းအကြွေးများအနက် တရုတ်ကို ပေးရန်ရှိသည့် အကြွေးသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဝါဒချမှတ်သူများက များပြားလာ သော အကြွေးများအတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တရုတ်ထံမှ ချေးငွေများကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဆပ်ရန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းဆော်ဩခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ငွေချေးသည့် နိုင်ငံများအနက် တရုတ်၏ ချေးငွေအတိုးနှုန်းသည် အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို ‘ကြွေးမြီထောက်ချောက်’ ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မြန်မာသည် တရုတ်ချေးငွေ တစ်ဘီလီယံ တိတိ ဆပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ‘ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း’ ကို တရုတ်အကူအညီဖြင့် မူလက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ‘၇ ဒဿမ ၃ ဘီလီယံ’ ဖြင့် ရင်းနှီးလုပ်ဆောင်ရန် လျာထားသော်လည်း တရုတ်၏ ‘ခေါင်းပုံဖြတ်မူဝါဒ’ များကြောင့် အကြွေးနွံနစ်မည် စိုးရိမ်၍ ‘၁ ဒဿမ ၃ ဘီလီယံ’ အထိ လျှော့ချပစ်ခဲ့ကြောင်း ‘မဇ္ဈိမသတင်း’ ဆောင်းပါတစ်ပုဒ်၌ ဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသည်။
အရှေ့တောင်အာရှအခြေစိုက် ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာ ‘Bertil Lintner’ က တရုတ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အမည်ခံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို လွှမ်းမိုးရန် ကြံစည်သည့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အသေးစိတ် လေ့လာမှုများ လုပ်ခဲ့သည့် ‘Lintner’ ၏ အဆိုအရ တရုတ်တို့သည် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက် အထမြောက်ရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ အရေးပါမှုကို သိရှိနေသည်။ တရုတ်တို့၏ ငွေကြေးအကူအညီကို ရယူထားသဖြင့် စိုးရိမ်နေကြသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် အသိဉာဏ်သုံးပြီး သတိရှိရှိ နေခြင်းဖြင့်သာ ဤအခြေအနေကို တွန်းလှန်နိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ‘Bertil Lintner’ က သုံးသပ်ထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ကြွယ်ဝသော ကျောက်စိမ်းရတနာသိုက်များကို ဥပဒေ လက်တစ်လုံးခြား အဓမ္မ လက်ကုန်နှိုက်ရယူကြ ရာတွင် စစ်တပ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ မူးယစ်ရာဇာများနှင့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသောကြောင့် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်နေသည်ဆိုသည့် မြေပြင်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှာ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရာနယ်မြေ ဖားကန့်တွင် ထုတ်ဖော် မပြောသော်လည်း လူတိုင်းသိသည့် အချက်ဖြစ်သည်ဟု ‘Global Witness’ အစီရင်ခံစာ၌ ဖေါ်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗျူရိုကရေစီယန္တရား ကွင်းဆက် အဆင့်ဆင့်တွင် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများရှိကြောင်း စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများအရသိရသည်ဟု ‘Global Witness’ ကဆိုသည်။ လိုင်စင်လျောက်ထား ရာတွင် လာဘ်ပေးရခြင်း၊ ကျောက်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးများကို နှိမ့်ချသတ်မှတ်ပေးရန်အတွက် အရာရှိများအား လာဘ်ပေးရခြင်း၊ ကျောက်စိမ်းများကို မှောင်ခိုသယ်ဆောင်ရာတွင် ချောမွေ့စေရန် စစ်တပ်၊ ဒေသခံပြည်သူ့စစ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား လာဘ်ပေးရခြင်းများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
တရုတ်ပြည်၏ ကျောက်စိမ်းဝယ်လိုအားသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခများ ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပြီး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အခက်အခဲအဟန့်အတားများ ပေါ်ပေါက်စေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများနှင့် စားသုံးသူ ဝယ်လိုအားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းမှ သတင်းအရင်းအမြစ်များ၏ အဆိုအရ ကျောက်စိမ်း ၅၀ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ မှောင်ခိုတင်သွင်းကြသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဖြစ်ထွန်းနေစေသည့် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသော လုပ်ငန်းကို တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေသည်ဟု ‘Global Witness’ ၏ သုတေသန က ဖေါ်ပြနေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောက်အခွန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ‘၁၂ ဒဿမ ၃ ဘီလီယံ’ တန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းများကို တရားဝင်တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းပမာဏသည် အမှန်တကယ် ကုန်သွယ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဟု ဆိုသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူများနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့အတွက် အကျိုး ကျေးဇူး အနည်းငယ်မျှသာ ရရှိသည်ဟု ‘Global Witness’ အစီရင်ခံစာ၌ သုံးသပ်ထားသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် တရုတ်၏ အနီးစပ်ဆုံး မဟာမိတ်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံသည် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ များကို ခေတ်မီလက်နက်များထောက်ပံ့နေကြောင်း အရိပ်အမြွက်မျှပြောကာ ထိုသူပုန်အဖွဲ့များအား နှိမ်နင်းနိုင်ရေးအတွက် ‘နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု’ ရရန် ကြိုးပမ်းလာခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၂၅ ခန့်က ရုရှနိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံဌာန (Zvezda) ၏ အင်တာဗျူးတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လှုပ်ရှားနေကြသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသည် အားကောင်းသော အင်အားစု နောက်ခံရှိထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်း သူပုန်အဖွဲ့များကို နှိမ်နင်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရန်ကြိုးပမ်းမည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ‘အားကောင်းသော အင်အား စု’ ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းသည် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံအား ရည်ညွှန်းကြောင်း သိသာနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကြမ်းဖက်သမားများကို ထောက်ပံ့နေသည့် “အားကောင်းသောအင်အားစု”ဟူသော စကားအသုံးအနှုန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ရုရှနိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံဌာနအား ပေးခဲ့သော မှတ်ချက်အရ နေပြည်တော်ရှိ တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားနှင့် ထပ်တူကျနေသည်ဟု ပြောနိုင် ပေသည်။
တပ်မတော်က ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ ဖမ်းဆီရမိသည့် လက်နက်များသည် တအာင်း အဖွဲ့TNLA ၏ လက်နက်များဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် လက်နက်အများစုပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြေပြင်မှ လေယာဉ်ပစ် လက်နက် FN6ဆိုလျှင် တစ်လက်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရ၀ဝဝဝ နှင့် ၉၀ဝဝဝ ကြား တန်ဖိုးရှိသည်ဟု သိရသည်။ မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်များအပါအဝင် လက်နက်ခဲယမ်း အမြောက်အမြား တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ တပ်မတော်က ဖမ်းမိသည့် လက်နက်များမှာ ပခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ်လက်နက်တစ်လက်အပါအဝင် လက်နက်မျိုးစုံ ၁၇၀ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ အတောင့် ၄၅၀ဝဝ ကျော်၊ ယူနီဖောင်းအိတ်ကြီး ရ၇ အိတ်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်း လက်နက်များသည် တရုတ်နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည်ဟု တပ်မတော််က ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် လက်နက် အများစုသည် တရုတ်နိုင်ငံလုပ် လက်နက်များဖြစ်သည်ဟု ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီက ပြောကြားသည်။ ဖမ်းမိသော လက်နက်များသည် အသစ်ကျပ်ချွတ်များ ဖြစ်နေပြီး ပခုံးထမ်းလောင်ချာ RPG များ ဆိုပါက ပါကင် မဖောက်ရ သေးသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအင်စတီကျု(MIPS) အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းဇော်ဦး က ဘီဘီစီ သို့ ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အများစုသည် တရုတ်လက်နက်များ အသုံးပြုကြပြီး တရုတ်နယ်စပ် တစ်လျှောက် လှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအား ထိန်းချုပ်ရန် တရုတ်၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် သံသယရှိဖွယ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သူပုန်အဖွဲ့များအား လက်နက်ထောက်ပံ့မှု မရှိဟု တရုတ်က ငြင်းဆိုသော် လည်း ထိုသို့ ငြင်းဆိုမှုများကို မြန်မာဘက်က အယုံအကြည် မရှိဟု ဆိုသည်။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလတွင် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်အား ကြိုဆိုဧည့်ခံချိန်၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယင်း လက်နက်များအရေးကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သည်။ ‘သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်’ က ယင်းကိစ္စကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စေ့စေ့ စပ်စပ် စစ်ဆေး၍ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမည်ဟု ကတိပြုသော်လည်း၊ သူပုန်များအနေဖြင့် အခြားလမ်းကြောင်းမှလည်း တရုတ်လက်နက်များ ရရှိနေသည်ဟု ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့၌ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပို့မည့် တရုတ်နိုင်ငံလုပ်လက်နက်များကို ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် ရဲအပါ အဝင် အထူးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ဧရာဝတီ သတင်းအရ သိရသည်။
မဲဆောက်မြို့ မယ်သောင်ကျေးရွာ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦး၏ နေအိမ်ကို ပူးပေါင်း အထူးတပ်ဖွဲ့က စီးနင်း ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာမှ ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်နက်များထဲတွင် AK 47၊ စက်လတ်၊ တင့်ကားဖျက်မိုင်း၊ လက်ပစ်ဗုံးများနှင့် ကျည်များ ပါဝင်သည်။ မြန်မာဘက်မှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ဝယ်လိုအားကြောင့် မဲဆောက်မြို့တွင် လက်နက်ဈေးကွက် ရှိနေကြောင်း သတင်းများကဆိုသည်။ အဆိုပါ လက်နက်များမှာ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အိန္ဒိယ အစိုးရကို ပုန်ကန်နေသည့် ကသည်းသူပုန်များ၊ နာဂအဖွဲ့များနှင့် ရခိုင်တပ်(AA)တို့ထံ ရောက်သွားလေ့ရှိသည်ဟု ဆို သည်။
သို့ရာတွင် အခြားမျက်နှာစာ၌ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရာတွင် တရုတ်အစိုးရက ကြားဝင်စေ့စပ်သူအဖြစ် အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အသုံးပြုသည့် လက်နက်များ သည် တရုတ်နိုင်ငံလုပ်လက်နက်များ ဖြစ်နေသည်။ တရုတ်နယ်စပ်ကိုဖြတ်၍ မှောင်ခိုဈေးကွက်မှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိသည်။ ယခုကဲ့သို့ တန်ဖိုးကြီး ခေတ်မီ လက်နက်များကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် ဝယ်ယူရန် ငွေကြေးမည်သို့ ရရှိကြ သနည်းဆိုသော မေးခွန်းပေါ်ထွက်နေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် သယံဇာတများ ရောင်းချသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ငွေကြေးရရှိနေသည်ဟု ယူဆနေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံလုပ် FN-6 ပခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ်ဒုံးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Asia Times Online သတင်းစာ၌ စစ်လက်နက် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ အန်ထိုနီဒေးဗီးစ် (Anthony Davis) ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အချို့မှာ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းရုံ မက မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂရုပြုသင့်သော အချက်အလက်အချို့လည်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း စစ်မျက်နှာ တွင် MANPADS(Man-portable air-defense system)ဟုခေါ်သည့် အလွယ်တကူ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့် ပုခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ်ဒုံးလက်နက်ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရခြင်းသည် စိုးရိမ်စရာကောင်းသည့် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်သည်ဟု အန်ထိုနီ ဒေးဗီးစ် က သုံးသပ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ) က ထဲထဲဝင်ဝင် ပါ၀င်ပတ်သက်လာသဖြင့် FN-6 အသုံးပြုရန် စဉ်းစားခဲ့ပုံရသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် ဤဒေသပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ကြီးမားသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း Anthony Davis က သုံးသပ်သည်။
ယခုအထိ တပ်မတော်လေယာဉ်များကို MANPADS အမျိုးအစား ပခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ်ဒုံးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုမျိုး မြန်မာပြည်၌ မရှိသေးသော်လည်း၊ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် FN-6 ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရှိလာရချိန်တွင် မြန်မာ လေသူရဲများ မည်ကဲ့သို့ သော နည်းဗျူဟာဖြင့် ခုခံကာကွယ်မည်နည်းဆိုသည်ကို စဉ်းစားထားသင့်သည်ဟု Anthony Davis က သုံးသပ်သည်။ တစ်ဆင့်မြှင့် စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင် MANPADS ပခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်များ အလွယ်တကူ ရောက်လာနိုင်သော ကြောင့် တပ်မတော်လေယာဉ်များသာမက အရပ်ဖက် ခရီးသည်လေယာဉ်များအတွက်ပါ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသည်ဟု သူက ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ လာရှိုး၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် မန္တလေး လေယာဉ်ကွင်းများအပြင် ရခိုင်ရှိ လေယာဉ်ကွင်းများကိုလည်း ခြိမ်ေးခြာက်လာနိုင်ကြောင်း အန်ထိုနီဒေးဗီးစ် က ထောက်ပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံလုပ် FN-6 ပခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ်ဒုံးကို တိုက်ပွဲနယ်မြေအတွင်း တွေ့လာရခြင်းကြောင့် အရပ်ဖက်စီးပွားဖြစ် လေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက်လည်း စိုးရိမ်စရာကိစ္စအဖြစ် ထည့်တွက်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ က မလေးရှားလေကြောင်းခရီးစဉ် ‘Flight MH17’ လေယာဉ်သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှ ပစ်ချခံရပြီး ခရီးသည် ၂၉၈ ဦး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးကြောင်း အန်ထိုနီဒေးဗီးစ် က ထောက်ပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာအပေါ်ထားသည့် မူဝါဒသည် ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလုပ်ကြောင်းနှင့် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီထောက်ပံ့မှု မပြုကြောင်း ပြောကြား လေ့ရှိသော်လည်း မြေပြင်ဖြစ်ရပ်များအရ ယင်းသို့ပြောဆိုမှုများမှာ အပေါ်ယံစကားမျှသာ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာ တရုတ်၏ တရားဝင်မူဝါဒတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CCP) နှင့် ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) တို့အကြား တရားဝင်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်း ဖွင့်ထားသည့် ကိစ္စမျိုးမှာ ပြည်တွင်းရေးစွက်ဖက်ရာ ရောက် ကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိသည်။ EAOs တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား လက်နက်ရောင်းချသည့်ကိစ္စမှာလည်း အစိုးရ တပ်မတော် အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှု မလုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သည့် နည်းဗျူဟာဖြစ်၍ EAOs များအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေး မူဝါဒသည် ‘မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်’ ဟု ဆိုနိုင်သည်။
တရုတ်က မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်သို့လည်း လက်နက်ခဲယမ်းများ ရောင်းသည်။ မြန်မာ့သယံဇာတများ တရားမဝင် လမ်း ကြောင်းမှတဆင့် တရုတ်ဈေးကွက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး၊ တရုတ်ထံမှ လက်နက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပြန်ဝင်လာကြောင်း ‘EASTERN LINK’ အွန်လိုင်းသတင်းစာ ဆောင်ပါးရှင် ‘Anders Corr’ ၏ သတင်းဆောင်းပါး(China’s diplo-terrorism in Myanmar) ၌ ဖေါ်ပြသည်။ အမည်မဖေါ်လိုသော သြစထရီးယန်းသုတေသီ တစ်ဦးက ရခိုင်တပ်(AA)သည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် လက်နက်မှောင်ခို ဈေးကွက်တွင် ‘Barter System’ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်တပ်(AA)က ဘိန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် မက်သဖက်တမင်းဆေးပြားများ ပေး၍ တရုတ်လက်နက်များ ၀ယ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည် နယ်ထဲတွင် မက်သဖက်တမင်းဆေးပြား စက်ရုံ ၃ ခုရှိပြီး၊ တစ်ခုမှာ တရုတ်၏ ကျောထောက် နောက်ခံ ရရှိထားသည်ဟု ဆောင်းပါး၌ ဖေါ်ပြသည်။ ယင်းအရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ တရုတ် ထောက်လှမ်းရေးများနှင့် ကုမ္ပဏီ များဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဒေသများတွင်မူ သူတို့သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ အဖြစ် အယောင်ဆောင် အလုပ်လုပ်သည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသော သြစထရီးယန်း သုတေသနပညာရှင်က ဆိုသည်။ သို့သော်သူတို့အနေဖြင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် ‘တရုတ်ကွန်မျူနစ်ပါတီ’ တို့ထံ အစီရင်ခံစာ တင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိ အရေးကြီးသည့် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ (BRI) စီမံကိန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထဝီအနေအထား အရ အရေးပါသည့်နေရာ၌ ရှိနေသည်။ BRI စီမံကိန်းအရ တရုတ်နိုင်ငံ လိုချင်သော အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ထွက်ပေါက်သည် မြန်မာကို မဖြတ်ဘဲ မရရှိနိုင်သဖြင့် မြန်မာ့ပထဝီအနေအထားက အရေးပါနေခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း’ သည် BRI ၏ အစိပ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများသို့ တရုတ်က လက်နက်ရောင်းနေသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးအရ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမြဲကူညီလျှက်ရှိသည်ဟု တရုတ်အစိုးရက ပြောလေ့ရှိသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး/ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အစိုးရက ပြတ်သားစွာ ပေါ်လစီချမှတ် ကူညီထာက်ပံ့သွားမည်ဟု တရုတ်စိုးရ၏ အထူးသံတမန် ‘မစ္စတာ ဆွန်ကော့ရှန်း’ က ပြောဖူးသည်။
တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် (Xi Jinping) ဇန္နဝါရီ ၁၇-၁၈ က မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ သဘောတူညီမှု ၃၃ ခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်သည် နေပြည်တော် သမ္မတ အိမ်တော်၌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ MoU ၃၃ ခု သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများတွင် ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်၊ အစုရှယ်ယာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် အပါအဝင် မူဆယ်-မန္တလေး ရထားလမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု အစီရင်ခံစာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း စာလွှာ၊ ရန်ကုန်မြို့တော် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး စီမံကိန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ရွှေလီ-မူဆယ် နယ်စပ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဇုန် မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်တိုးတက်စေရေး နားလည်မှု စာချွန်လွှာ၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အကြား မြန်မာ့ စီးပွားရေးစင်္ကြန် ပူးတွဲ တည်ထောင်ရေး မူဘောင်အောက်မှ ဒေသန္တရအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ ပါ၀င်သည်ဟု အစိုးရသတင်းများ၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက သူတို့ဒေသတွင်း ပြုလုပ်မည့် အကြီးစား တရုတ် စီမံကိန်း များကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက တရုတ်-မြန်မာသဘောတူ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုပါက၊ အစိုးရချင်းသဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဒေသခံများ၏ သဘောထားကို ဦးစွာ တောင်းခံရန်၊ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြရန်၊ ဗဟို အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းက ချုပ်ကိုင်မှု မလုပ်ရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ လူမှုစီးပွား ထိခိုက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် စသည်ဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA က တရုတ်နိုင်ငံ၏ BRI စီမံကိန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုလားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ UWSA “ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်” က BRI စီမံကိန်းသည် မြန်မာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၏ ခေတ်နောက်ကျနေသော စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍများတွင် အကျိုး ကျေးဇူးရှိမည်ဟု ဆိုသည်။ တအာင်းလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ‘TNLA’ ကလည်း BRI စီမံကိန်းများ အောင်မြင်ပါက ပြည်သူ့အကျိုး ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်”(SNLD)က တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပေါ် ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့စွဲဖြင့် သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုလျှင် ဒေသခံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ၏ သဘောထားကို ရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဗဟိုအစိုးရက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများ ပိုများလာမည်ဟု ဖေါ်ပြ ထားသည်။ တရုတ်၏ စီးပွားရေးစီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်ရာ၌ မြေယာပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း SNLD ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးစိုင်းလိတ် က သတင်းမီဒီယာများ သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်၏ ကြွေးမြီထောင်ချောက်နှင့် နိုင်ငံရေးသြဇာအောက်မှ လွတ်မြောက်စေရန် လက်ရှိမြန်မာအစိုး၌ အထူး တာဝန်ရှိ နေသည်။ မြန်မာပိုင်နက်အတွင်း BRI စီမံကိန်း တရားဝင် အကောင်အထည်မဖေါ်မီ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာ သတင်းမီဒီယာများနှင့်တကွ မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး နိုင်ငံရေးသတိ စီးပွားရေးသတိ အထူး ရှိရန်လိုပါသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီများဘက်က ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနဲ့တကွ ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာစေရန် ၀ိုင်းဝန်း ထိန်းကျောင်းရပါမည်။ BRI စီမံကိန်းများ စတင် တော့မည် ဆိုလျှင် ပြည်သူအများအား မြင်သာထင်သာ အသိပေးရန် လိုသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် BRI စီမံကိန်း ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ လက်မှတ် မထိုးမှီ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အသီးသီး၊ ပြည်နယ်/ တိုင်း အစိုးရ အသီးသီးတို့အား အကျိုး အပြစ်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာ သုံးသပ်ခွင့် ပေးရပါမည်။ သတင်းမီဒီယာများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူ ခွင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ပေးရပါမည်။ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး သြဇာချဲ့ထွင်လာနိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး စီမံကိန်း များနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် “အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှု ပြဿနာ” ကို အစိုးရက တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ ‘မြန်မာ့ အချုပ်အခြာအာဏာ’ ပွန်းပဲ့မှုကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ်ရာ၌ “ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူ ၅ ချက်” အရ အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိရန် အစိုးရအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင် မြန်မာသည် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်တို့အကြား ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ပဓါနကျသည့် နေရာ၌ ရှိသည်။ တရုတ်သြဇာချဲ့ထွင်လာမှုကို အိန္ဒိယ က ထိန်းညှိဟန့်တားလျှက်ရှိသည်။ ထို့အတူ တရုတ်၏ နိုင်ငံရေးသြဇာချဲ့ထွင်မှု အန္တရာယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက် စေရန် ဂျပန်၊ အီးယူ၊ အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများကလည်း ၀ိုင်းဝန်း ထိန်းညှိပေးနေသည်ကို အစိုးရ အနေဖြင့် ကြိုဆိုသင့် သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာကို ကိုင်တွယ် ကစားနေသော တရုတ်၏ ‘မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက် မူဝါဒ’ ကို လျစ်လျူမပြုမိရန် လိုသည်ဟု သုံးသပ်မိပေသည်။။။
1. Arakan Army gets Chinese weapons through BANGLADESH -
2. China’s diplo-terrorism in Myanmar
* ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ ၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါး။
ဇင်လင်း - တရုတ် အိန္ဒိယ သြဇာပြိုင်ဆိုင်မှု ကြားက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ရေး Reviewed by MoeMaKa on 12:40 AM Rating: 5